SharePod maka Mac -Transfer Music na site na iPod / iPhone / iPad
> Resource> Nyefee> SharePod maka Mac - Nyefee Music na site na iPod / iPhone / iPad
SharePod a maara dị ka a dị mfe ma fechaa ngwá ọrụ nyefee music si iPod, iPhone, na iPad ka iTunes na ndị ọzọ na ụzọ gburugburu. Ugbu a SharePod maka Mac dị kwa. Ọ na-ese otu na Windows version. Otú ọ dị, SharePod na SharePod na-adịghị free iji ihe ọ bụla ọzọ. I nwere ike ịgbalị na atụmatụ ejedebeghị ikpe mbipute ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ maka zuru version. My ahụmahụ na-agbalị SharePod maka Mac-enyere m aka na-ekpebi ike ikwu na ị na SharePod maka Mac, Wondershare TunesGo (Mac).
Eziokwu ka okwu ọnụ ike. Gosipụta na ihe m na-ekwu okwu site na iji free ikpe mbipute!
2 Ihe Kpatara ka nwere ike ikwu na SharePod maka Mac ọzọ
Ọzọ atụmatụ: SharePod maka Mac naanị mbipụta music na site na iPod, iPhone, na iPad. Wondershare TunesGo (Mac) - kacha mma SharePod maka Mac ọzọ na-enyefe ọ bụla song na site na iPod, iPhone, na iPad hassle kpam kpam. Mgbe nkwado ndabere na mpaghara niile songs si gị Apple ngwaọrụ iTunes, ọ ga-foneelu si oyiri songs, naanị transfer mkpa n'anya. Na mmata, ọ na-akwado videos na foto nyefe si na iPod, iPhone, na iPad, ndabere olu memo, audiobooks, pọdkastị, iTunes U na ndị ọzọ ka gị na Mac.
Nnọọ mfe iji: The SharePod maka Mac ọzọ dị nnọọ mfe. Na onye ọrụ-enyi na enyi window, ọ bụla onye ọrụ, ọbụna ndị na-amaghị ọtụtụ kọmputa usoro ga-agafeta media faịlụ effortlessly. Na isi window, ngwa ngwa accesses nkwado ndabere na mpaghara iPod, iPhone, na iPad music ka iTunes na kọmputa na-nyere. Nanị otu click, ọrụ ga nweta ha ihe mgbaru ọsọ.
Nzọụkwụ na-nzọụkwụ ndu n'ihi na otú e si eji SharePod maka Mac ọzọ
Nzọụkwụ 1. Wụnye SharePod maka Mac Ẹkot software
Wụnye na ẹkedori Wondershare TunesGo (Mac) na gị Mac. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na ọhụrụ OS X Mavericks. Jikọọ gị Apple ngwaọrụ na gị Mac site eriri USB. The 4 nke na 5th ọgbọ iPod aka, iPhones na iPads na-agba ọsọ iOS 5 na mgbe e mesịrị-n'ụzọ zuru ezu na-akwado. Na mgbe ahụ ị ga-ahụ na SharePod maka Mac ọzọ ga-egosipụta gị Apple ngwaọrụ na ya isi window.
Nzọụkwụ 2. Nyefee mgbasa ozi faịlụ na site na iPod, iPhone, na iPad
Na isi window, ị pụrụ ịhụ 3 nhọrọ: "Iji iTunes", "Iji Mac" na "Iji iDevice". Site na ịpị "Iji iTunes", ị ga-ndabere nile songs si gị Apple ngwaọrụ ozugbo gị iTunes Music Library on Mac. "Iji Mac" pụtara niile songs site na ngwaọrụ gị ga-kwadoo ka a nchekwa gị Mac. Site na ịpị "Iji iDevice", i nwere ike nyefee songs si gị Mac ngwaọrụ gị.
E wezụga ohere ngwangwa, ị nwekwara ike pịa kwekọrọ ekwekọ faịlụ ụdị ịbanye a ọhụrụ window si ebe ị na-enwe ike mbubata mbupụ gị faịlụ. Were a lee anya na screenshot n'okpuru.
Gbalịa mee ihe ndị SharePod maka Mac ọzọ ugbu a!